Siihayaha Wasiirka Warfaafinta oo qado u sameeyay Arday Naafo ah ”SAWIRO” – Radio Muqdisho
Mudane Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa maanta Magaalada Muqdisho qado sharaf waxa uu ugu sameeyay Arday Naafo ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo la’araga isla markaana dhigta iskuulka Albasiir ee kuyaala degmada Waaberi.
Siihayaha Wasiirka Warfaafinta ayaa ugu horeyn sheegay in madaxda Qaranka ay tahay waajib saaran in dhibka ay la qeybsadaan bulshada nuucaan ah oo u baahan in loo gurmado isla markaana ah kuwo aan shaqaysan Karin.
Qaar ka mid ah Naafadii maanta uu waqtiga la qaatay mudane Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow isla markaana uu qado sharafta u sameeyay ayaa uga Mahad celiyay waqtiga wanaagsan uu gu bixiyaya in uu la qadeeyo xaaladoodana la socdo, iyagoo ku amaanay la socoshada dadka ugu liita bulshada sida Cuuryaamiinta, Masaakiinta barakacayaasha, iyo dadka kale ee dhibaatada nolosha la daalaa dhacaya.
Maamulka iskuulka indhoolayaasha Albasiir ayaa ka Mahad celiyay kulanka qadada ah uu u sameeyay indhoolayaasha wasiir Mustaf Dhuxulow iyagoo sheegay in uu yahay mas’uul ku dayasho mudan .
Sidookale Siihayaha Wasiirka Warfaafinta ayaa isaga iyo Ardaydii Naafada ahayd oo uu casuumay waxa ay waqti kuwada qaateen xeebta liido ee degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir
Siihayaha Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa markii labaad kulan qado ah u sameeyay Ardayda Naafada u baahan in la caawiyo talaabadaas oo ah mid ku dayasho mudan